China FR5 Hard Epoxy Glassfiber Glass laminated Sheet orinasa sy mpanamboatra | Xinxing
Ity vokatra ity dia voahosotra noho ny hafanana avo sy ny tsindry avo amin'ny alàlan'ny herinaratra alika maimaim-poana vita amin'ny lamba fibre vita amin'ny epoxy resin manokana, dia an'ny fitaovana famafana hafanana grade F. Manana toetra mekanika avo lenta eo ambanin'ny mari-pana antonony izy io, ary fampisehoana herinaratra milamina eo ambanin'ny hafanana avo Izy io dia mety ampiasaina amin'ny mekanika, herinaratra ary elektronika ho toy ny singa avo insulate. Manana tanjaka mekanika avo lenta, herin'ny mekanika fanjakana mafana, fanoherana afo, fanoherana hafanana ary fanoherana ny hamandoana.
Araka ny GB / T 1303.4-2009 herinaratra thermosetting resin indostrialy laminates - Fizarana 4: epoxy resin mafy laminates, IEC 60893-3-2-2011 fitaovana insulate - lozisialy thermosetting resin laminate mafy indostrialy - Fizarana 3-2 amin'ny fitaovana tsirairay famaritana EPGC204.
1.Ny toetran'ny mekanika ambany eo ambanin'ny maripana midium;
2.Miorina tsara amin'ny alàlan'ny hafanana ambony ny herinaratra;
3.Hatanjaka mekanika avo
4.Tanjaka mekanika ambany mari-pana ambony;
6. fanoherana ny hamandoana avo;
7.Mety tsara machinability;
8. fanoherana ny toetr'andro: Kilasy F, 155 ℃
9. fananana maharitra maharitra: UL94 V-0
Ampiasaina amin'ny fitaovana mekanika, elektrika, herinaratra ho toy ny singa insulation, ary ampiasaina amin'ny menaka fanovana sy tontolo mando.
FR5 raha ampitahaina amin'ny FR4, avo kokoa ny TG, ny thermostablity dia ny grade F (155 degree), ny FR5 anay dia nandalo ny fitsapana ny EN45545-2: 2013 + A1: 2015: Fampiharana lalamby - Fiarovana amin'ny fiara ny lalamby -Fizarana2: Ilaina ho an'ny fitondran-tena afo amin'ny fitaovana sy singa.ary eken'ny CRRC, manomboka manome FR5 hatramin'ny CRRC manomboka amin'ny taona 2020. Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa aminay.
03 Hery hiondrika mitsangana ara-dalàna MPa 80380
06 Faharetana amin'ny sintona MPa ≥300
09 Fandraisana tsy tapaka diélectrique （50Hz) - ≤6.5
10 fiparitahan'ny diélectrique （50Hz) - ≤0.04
Teo aloha: 3250 Epoxy Glassfiber Laminated Sheet
Manaraka: Anti-Static Epoxy Glassfiber Laminated Sheet